Ny trano fandraisam-bahiny Soamahatony | Chambre d'hôtes à Antananarivo - Soamahatony
Ny trano fandraisam-bahiny Soamahatony
Submitted by admin on Fri, 12/03/2010 - 14:47
Azo ambara ho trano fandraisam-bahiny mahafatra-po i Soamahatony, fa sady ahafahana mihazo ireo faritra samihafa manerana ny nosy, no ahazoana mijanona ao amin’ny faritra Analamanga ihany koa, izay anarana nomena ny faritry ny renivohitra ankehitriny.
Misy trano lehibe iray manerinerina eo ambonin’ny tanimbarin’Antehiroka izay mitondra ny anaran’ny foko vazimba nihanaka tamin’ny faritra avaratr’Antananarivo tamin’ny taon-jato faha 16. Misy efitra telo malalaka any ambony rihana (ny roa misy farafara lehibe ho an’olon-droa, ary ny iray misy fandriana telo ho an’olon-tokana). Tazana avy eny an-davarangana ireo tanimbary sy farihy ary vohitra eto afovoan’Imerina. Misy fanasan-tanana (rano mangatsiaka sy mafana) ny efitra tsirairay, ary ny trano fandroana sy fivoahana any ambony rihana kosa dia iombonana. Ahafahana mampiasa internet (WIFI) isan’efitra. Misy ordinateur azo ampiasaina ihany koa ao an-dalan-tsara any ambony.
Manodidina ny "cheminée" azo andrehetana afo ao amin’ny efitrano lehibe iombonana ao ambany rihana dia misy fahitalavitra mampiasa satellite ary misy "chaine hifi". Ankoatra izany dia hahita boky tranainy sy vaovao isan-karazany ireo izay te hahalala bebe kokoa momba ny toerana samihafa tiany hotsidihana. Miandry anao ao koa ny trano fihinanana izay ahafahana mitazana ny ao an-dakozia : eo amin’ny varavaram-pitaratra manelanelana azy ireo no ampitana ireo sakafo haroso ho eny ambony latabatra. Ny masoandro miposaka kosa no handefa taratra mahasondriana hanazava ny sakafo maraina haroso ho anao. Fa azo atao ihany koa ny mihinana eo ivelany (terrasse) izay mahatazan-davitra sady ikoranan’ny vorona samihafa, toy ny fody, tsikirity sy maritaina sy ny sisa.
Tsy lavitra ny trano lehibe no misy ny "villa Oliver" izay mitondra ny anarana anglisy iray tonga teto Madagasikara tamin’ny andron’ny Mpanjakavavy Victoria tamin’ny 1860-62. Mandravaka ny rindrin’ny "villa Oliver" ny sary nataon’io Anglisy io.
Azo andraisam-bahiny amin’ny fomba samihafa io villa io. Na ampiasaina mitokana ny efitra tsirairay izay azo andraisana olona roa na telo, na hofaina fianakaviana iray manontolo (hatramin’ny olona fito) mandritra ny iray volana na mihoatra. Mahaleo tena ny mpanofa amin’izay satria misy toerana azo ahandroan-tsakafo sy garazy ny villa. Ahatazanana tanety mitohatohatra sy voafefina fantaka ary mahatsinjo ireo tanimbary manodidina ny toerana. Mena midorehitra ny farihin’Ambohibao rehefa tarafin’ny masoandro mody…
Tsy adino koa ny fialam-boly ho an’ny zaza madinika : savily sy toboggan, lalao baolina sy toerana misy fasika voadio. Ireo ankizy efa lehibebe kosa dia afaka milalao badminton, pétanque na mandeha mitaingina bisikileta eny ami’ny fefiloha na mitety ireo vohitra manodidina. Maro ihany koa ireo lalan-kely voavoatra ao Soamahatony, izay ahazoana mamantatra sy mandinika ny zava-maniry samihafa mbamin’ny voahary ambanivohitra izay miova endrika tsy mitsahatra, arakaraka ny ora sy ny tonon-taona.
I Sahondra no mikoja sy mahandro ireo vokatry ny tany ao Soamahatony sy ny manodidina. Raisiny mivantana any amin’ny mpamokatra izany, na koa vidiny eo an-tsenan’Ambohijanahary. Izy ihany koa no mandroso ny sakafo izay iarahany mihinana amin’ny mpitsidika. Tsy manan-tsahala ny confitures ataony avy amin’ireo vokatry ny taniny : goavitsinahy, voanatsindrana, voasary makirana, paiso gasy sy paisom-bazaha, mananasy, ets...